Ahoana ny fametrahana Rom Cyanogen amin'ny Android 2.1 amin'ny htc G1 sy htc Magic | Androidsis
Ahoana ny fametrahana Rom Cyanogen miaraka amin'ny Android 2.1 amin'ny htc G1 sy ny Magic Magic
antocara | | About us, Rom, Tutorials, Android Version
Araka ny efa noresahintsika andro lasa izay Cyanogen nanana iray rom saika vonona ny hivoaka miaraka amin'ny Android kinova 2.1 miasa tanteraka ho an'ny terminal htc G1 sy htc Magic. Ny rom dia efa misy na dia tsy ny endriny farany aza izy ary beta, noho izany dia mety hiteraka hadisoana noho ny iray hafa. Notsapainay izany tamin'ny htc G1 ary ny hany lesoka dia ny fanjifana batterie dia somary lehibe, raha tsy izany dia tonga lafatra, ao anatin'izany ny mety hampiasana ny fakantsary ho an'ny sary sy horonan-tsary ary ny tranokala multimedia vaovao.
Ny fepetra apetraka amin'ny fametrahana an'ity rom ity dia vitsy ary afaka mametraka azy ao a Magic Magic ilaina ihany ny fananana fidirana amin'ny root amin'ny terminal, amin'ny tranga Htc G1 ankoatry ny fananana fidirana faka dia ilaina ny mametraka ny malaza Haykuro SPL.
avy amin'ny androidsis Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mety hitranga amin'ny terminal izahay.
Ho an'ny zavatra rehetra hazavainay etsy ambany dia tsy maintsy apetraka amin'ny laoniny fanarenana toa an'i Amon-ra isika, eto hazavainay ny fomba fanaovana azy.
Mametraka ny SPL sy ny Cyano Rom miaraka amin'ny Android 2.1 amin'ny htc G1
1.- Mila manamarina isika fa manana radio mifanaraka amin'ny SPL ka mankany mode fastboot (bokotra fakantsary + herinaratra) ary hitantsika hoe iza no ananantsika, ireo mifanentana dia 2.22.19.26l sy 2.22.23.02. Mijery tampoka ny karazana SPL napetraka isika, ny andalana faharoa amin'ny maody fastboot dia milaza amintsika hoe iza no ananantsika, raha 1.33.2005 dia marina izany.
2.- Raha hitantsika fa tsy manana radio mifanentana isika dia ny mametraka ny radio no voalohany. Midina izahay ity rakitra ity ary adikao amin'ny karatra micro SD io. Izahay dia mamelona ny htc G1 amin'ny maody fanarenana (Home + on) ary mampandeha ilay rakitra efa nakaninay.
3.- Raha vao tafapetraka ilay onjam-peo mifanentana dia hanohy amin'ny SPL. Midina izahay ity rakitra ity ary adikao amin'ny karatra micro SD io. Ampidininay eto avy eto ny cyanogen rom ary adikao amin'ny karatra micro SD ihany koa.
4.- Ankehitriny dia mety kokoa ny manao a nandroid backup avy amin'ny maody fanarenana miverina amin'ny fanjakana ankehitriny raha misy tsy mety.
5.- Miaraka amin'ireo rakitra avy amin'ny dingana 3 nadikan'ny telefaona dia vonoinay izy io ary ampodintsika amin'ny fomba fanarenana (Home + on), alefaso aloha ny spl-signed.zip. Amin'ny fizotry ny fametrahana dia hangataka ny hamerenana amin'ny laoniny, hamerina ary hamita ny fametrahana amin'ny alàlan'ny fiverenany amin'ny fomba fanarenana.
6.- Mamafa isika
7.- Ankehitriny dia manazava ny rakitra romana cyano izahay, update-cm-5.0.7-DS-test1-signed.zip.
8.- Rehefa vita dia manomboka indray isika ary hiodina amin'ny Cyano rom miaraka amin'ny Android 2.1 napetraka. Mety mila fotoana kely vao manomboka.
9.- Hatramin'izao dia napetraka ny rom fa mila mametraka ny rindranasa Google mandeha anaty fonosana misaraka izahay. Ampidininay ity rakitra ity ary adikao amin'ny karatra micro SD. Izahay dia mandeha amin'ny maody fanarenana ary mamelatra ilay rakitra izay vao nosoratantsika ho an'ny terminal. Rehefa vita dia manomboka indray izahay ary hanomboka ara-dalàna ny telefaona ary miaraka amin'ireo rindranasa Google efa napetraka.
Mametraka ny Cyano Rom amin'ny Android 2.1 amin'ny htc Magic
1.- Ampidininay ity rakitra ity sy ity ary alainay amin'ny karatra micro SD.
2.- Mamelombelona ny terminal amin'ny fomba maody isika ary manao a nandroid backup ary namaoka.
3.- Alefantsika aloha ny rakitra cyanogen rom antsoina hoe update-cm-5.0.7-DS-test1-signed.zip. Rehefa vita izany dia esorintsika ny rakitra hafa izay ny Google fampiharana.
4.- Atsanganay indray ny telefaona ary efa ananantsika Android 2.1 napetraka ao amin'ny HTC Magic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » Ahoana ny fametrahana Rom Cyanogen miaraka amin'ny Android 2.1 amin'ny htc G1 sy ny Magic Magic
ichalez dia hoy izy:
Nametraka azy aho ary mandeha tsara manaraka ny torolàlana.
Amin'izao aloha dia be dia be izy io ary toa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Vao antsasaky ny adiny iray monja no nametrahana ny ROM ary nilatsaka haingana ny bateria.
Mamaly an'i ichalez
Toni DG dia hoy izy:
Salama. Marina, atelina ny bateria, fahafinaretana izaitsizy; Efa nametraka ny Test 2 aho halina ary toa tsy manamboatra. Olana iray hafa hita ny ao amin'ny MMS, ao amin'ny kinova Test 1 dia tsy mahazo na inona na inona mihitsy izy ary amin'ny Test 2 dia mandray ny lohateny misy bokotra rohy hampidinana ny MMS fa izay tsy mandeha. Nanamarina ireo APN ary voalamina tsara izy ireo, na izany aza tsy mandeha izy ireo.
Valiny tamin'i Toni DG
Salama, misy olona tsara fanahy ihany koa manazava amiko ny dikan'ny hoe manao backup backup, mamafa sy tselatra, misaotra betsaka
Alexsync dia hoy izy:
Lavorary, afa-tsy ny widget amin'ny fotoana. Lahatsoratra tsara ho an'ireo izay mahalala zavatra momba ny rafitra, zazavavikely izay tsy manandrana lany telefaona akory mandra-pahitan'izy ireo lahatsoratra mety na misy manazava ny hevitra sy ny baiko ataony amin'ny fotoana rehetra.
Valiny tamin'i Alexsync
Salama, manana majika aho fa tsy manana hevitra hamaka, nanandrana ary very hevitra foana. Mety misy olona avy any Cordoba hanongotra izany ho ahy? Handoa vola aho amin'izany.
Timoty dia hoy izy:
Hey, manana g1 aho, miorim-paka ny tenako, efa ela aho no nanao azy ary misy radio nohavaozina.
Mamaly an'i timothy
yael albert dia hoy izy:
0ola fanontaniana ny amerikanako dia ny htc g1 ary mifanaraka daholo ny zava-drehetra ary ny fanontaniana apetrako raha apetrako amin'ny android 2.1 dia hotereko hatrany ve ny sim dia nalefan'ny telefaoniko hivezivezy ary tiako ho fantatra fa hitohy hisoratra anarana. ny tel tel amiko dia ny findaiko dia res-t-mobile tsy ho ela azafady.
Valio i yael albert
Gera dia hoy izy:
Fa maninona no diso ny rohy fampidinana? Tsy azonao atao ny manampy ahy azafady.
Valiny tamin'i Gera
Raisiko ilay rom tsy haiko ny misintona azy
Mamaly an'i christopher
Fivoriana Android. Androany Juan Carlos Viota avy any Inizziativa
GvSig mini, mpijery sari-tany Open Source tonga amin'ny Android